Amabali EBhayibhile: Ukukhululwa EYiputa Kuse Kukumkani Wokuqala KaSirayeli - IWebhsayithi Esemthethweni YamaNgqina KaYehova
UMoses wakhokela amaSirayeli ekuphumeni ekuthinjweni eYiputa ukuya kwiNtaba yeSinayi, apho uThixo wawanika imithetho yakhe. Kamva, uMoses wathumela amadoda ali-12 ukuya kuhlola ilizwe lakwaKanan. Kodwa ali-10 kuwo abuya nengxelo embi. Abangela abantu bafuna ukubuyela eYiputa. Ngenxa yokuswela kwawo ukholo, uThixo wawohlwaya amaSirayeli ngokuwabhadulisa entlango kangangama-40 eminyaka.
Ekugqibeleni, uYoshuwa wanyulwa ukukhokelela amaSirayeli ezweni lakwaKanan. Ukuze awancede afumane ilizwe, uYehova wenza imimangaliso. Womisa amanzi oMlambo iYordan, wadiliza iindonga zeYeriko, wemisa nelanga imini yonke. Emva kweminyaka emithandathu, ilizwe lathatyathwa kumaKanan.
Ukususela kuYoshuwa, uSirayeli walawulwa ngabagwebi iminyaka engama-356. Sifunda ngabaninzi kubo, kuquka uBharaki, uGidiyon, uYifeta, uSamson noSamuweli. Kwakhona sifunda ngabafazi abanjengoRahabhi, uDebhora, uYaheli, uRute, uNahomi noDelila. Lilonke, iCandelo LESITHATHU ligubungela iminyaka engama-396 yembali.